आफ्ना प्रेमीले गिफ्टमा हिरा दिँदा स्वीकार गर्दिनन् सुष्मिता सेन, यस्तो छ रहस्य – Sandesh Press
October 17, 2021 99
सुष्मिता सेनलाई एक अन्तर्वार्ता मा सोधिएको थियो कि के उनी हीरा वा गहना उनको प्रेमी रोहमान शालद्धारा दिइएको उपहार आफ्नो दिलको नजिक राख्छिन् ? यसको लागी उनले भनिन्, ‘म साथीहरुलाई मलाई हीरा उपहार दिन दिन्न। म आफैं आफ्नो लागी हीरा किन्छु। मलाई उनीहरुलाई उपहारको रुपमा लिन मन लाग्दैन।
सुष्मिताले आफूले किनेको पहिलो हीराको बारेमा पनि भनिन्। उनले भनीन् कि मैले सुरुमा दस सेन्टको शुद्ध हिरा किनेको थिएँ। त्यस पछि बिस्तारै २२ क्यारेट किन्न थाले। उनी भन्छन् कि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँको लागी एक बेंचमार्क सेट गर्नुहोस्। म अझै आफै किनेको हीरा लगाउँछु। हीरा को आकार महत्त्वपूर्ण छ।एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री सुष्मिता सेन भन्छिन् कि महिलाहरुले आफ्नो लागी हीरा आफै किन्नु पर्छ। उनले खुलाएकी छिन् कि उनी आफ्नो प्रेमी रोहमान शाल बाट पनि हीरा उपहार लिन्नन्। सुष्मिता भन्छिन् कि उनी कसैलाई पनि हीरा उपहार दिन अनुमति दिन्नन्। आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा सुष्मिता भन्छिन् कि उनी आफ्नो प्रेमीलाई उनको लागी हीरा किन्न दिन्नन्।
Prevदेशले गुमायो मुर्धन्य ब्यक्तित्व ! ग्राण्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन
Nextए’सिडले ज’लेकी संगिताको गासियो लगनगाठो ।